हिमाल खबरपत्रिका | आफैंले निम्त्याएको समस्या
आफैंले निम्त्याएको समस्या
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सकको सुझाव विपरीत आवश्यक आराम नगर्ने र भीडभाड हुने कार्यक्रममा सहभागी भइदिंदा स्वास्थ्यमा समस्या आउने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति र तत्कालीन राजाले जस्तै यस पटकको दशैंमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिए, त्यो पनि दशमीदेखि चतुर्दशीसम्म चार दिन लगातार । प्रधानमन्त्री ओलीका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनालीका अनुसार त्रयोदशी र चतुर्दशीमा मात्र ओलीले दुई हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिएका थिए । उनको सचिवालयले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेपछि टीका लगाउनेको भीड झ्न् बढेको थियो ।
धपेडीकै कारण छातीमा संक्रमण भई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि १२ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि महाराजगञ्जस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भए । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका कारण संक्रमणबाट जोगिनु र स्वास्थ्यप्रति बढी सजग हुनुपर्ने व्यक्ति अस्पताल भर्ना भएपछि उनी गम्भीर बिरामी भएको आशंका गरियो । उसो त १० कात्तिकमा नेकपाले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको चियापान समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली नजानुको कारण उनको स्वास्थ्य अवस्था मात्र भनिंदा पनि त्यस्तो आशंकालाई बल पुग्यो ।
डा.शाहका भनाइमा, प्रधानमन्त्री ओलीलाई लागेको रुघाखोकी हो । तर, नाक–घाँटी हुँदै छातीसम्म पुगेको संक्रमणले श्वासप्रश्वासमा समस्या गराएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्‍यो । चिकित्सकहरूका भनाइमा, छातीमा संक्रमण भएपछि निमोनियाको सम्भावना बढी हुन्छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिको रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हुने भएकाले संक्रमण पनि चाँडै हुन्छ । १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका ओलीमा मधुमेहको समस्या पनि छ । रुघाखोकी लागेर अरुचि भएपछि प्रधानमन्त्रीले खाना नखाएको र त्योसँगै इन्सुलिन पनि नलिंदा शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्न गई अस्पताल भर्ना गर्नुपरेको डा.शाह बताउँछिन् । उनका अनुसार मधुमेहका बिरामीलाई संक्रमण भयो भने, शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्छ र त्यस्तो अवस्थामा कीटाणु चाँडै फैलिने सम्भावना हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जिद्दी स्वभाव र आराम नगर्ने बानी पनि उनको स्वास्थ्यमा समस्या आउनुको एउटा कारण रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन् । चिकित्सकहरूले उनलाई सकेसम्म भीडभाड हुने ठाउँमा नजान र भेटघाटलाई कम गर्न सुझव दिंदै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली त्यसको पर्वाह नगरी भेटघाट र सार्वजनिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन् । “उहाँको सर्वसाधारणसँग बढी रमाउने बानीले हामीले नचाहँदा पनि भेटघाट गर्नेको भीड हुन्छ”, प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार मैनाली भन्छन् । आफूले महत्वपूर्ण भेटघाटका लागि मात्र समय मिलाउने प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव नभएको उनी बताउँछन् ।
दशैंको टीका लगाउन आउने व्यक्तिबाटै ओलीमा संक्रमण भएको हुनसक्ने चिकित्सकहरूको अनुमान छ । एक वर्षअघि सम्पन्न आम निर्वाचनका वेला ओलीलाई चिकित्सकहरूले आराम गर्न सुझएका थिए । तर, त्यसवेला उनले देशदौडाहा गरे । “प्रधानमन्त्रीको आफ्नै खालको जिद्दी स्वभाव छ” शाह भन्छिन्, “कार्यकर्तासँग बढी घुलमिल हुँदा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको संवेदनशीलतालाई पनि कार्यकर्ताले बुझ्दििनुपर्दछ ।”
उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाका हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली दैनिक न्यूनतम सात घण्टा सुत्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझव छ । तर, ओली आफैं चारदेखि पाँच घण्टा मात्रै सुत्ने गरेको बताउँछन् । गएको भदौमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रियाका बेला उनले आफू राति दुई बजेपछि मात्रै सुत्ने गरेको खुलाएका थिए । निजी सचिवालयका अनुसार राति अबेरसम्म उनी भेटघाट र लेखपढमै व्यस्त रहन्छन् भने बिहान ६ बजे उठिसक्छन् । निद्राबाट ब्युँझ्निका लागि उनलाई ‘अलार्म’ नचाहिने निकटस्थहरू बताउँछन् । श्रीमती राधिका शाक्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेलैमा खाना र औषधि खुवाउने र निरन्तर उनको स्वास्थ्य अवस्थामा ध्यान दिइरहने हुँदा ओलीको आत्मविश्वास भने तुलनात्मक रूपमा बढी भएको डा.शाह बताउँछिन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले नमस्ते मात्रै गरे हुन्थ्यो’
प्राध्यापक डा. दिव्यासिंह शाह, मिर्गौला रोग विशेषज्ञ, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिको स्वास्थ्यमा कस्तो जोखिम हुन्छ ?
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेपछि शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमताले प्रत्यारोपण गरिएको अंग आफ्नो नभएको तुरुन्तै जानकारी पाउँछ । उसले प्रत्यारोपित मिर्गौलालाई शत्रुको रुपमा चिन्ने भएकोले प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौला जोगाउनका लागि विशेष औषधि दिइन्छ । पछि गएर प्रत्यारोपण गरिएको अंगलाई शरीरले विस्तारै स्वीकार्न थाल्छ ।
पहिलो एक वर्षमा संक्रमणको जोखिम एकदमै उच्च हुन्छ । यस्तो बेला सामान्य अवस्थाका मानिसलाई छुन नसक्ने र स्वस्थ व्यक्तिको शरीरमा रहने कीटाणुले पनि आक्रमण गर्दछ । जस्तै सामान्य अवस्थामा फंगस शरीरमा रहँदा फरक नपर्न सक्छ तर, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका बेला यसबाट पनि संक्रमणको जोखिम धेरै हुन्छ । त्यसकारण सफाइ र खानामा निकै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सामान्य मानिसले पचाउन सक्ने खाना पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका मानिसले पचाउन सक्दैनन् । यस्ता व्यक्तिमा झाडापखालाले पनि ज्यानकै जोखिम गराउँछ ।
मिर्गौला ‘फेल’ हुने कारण के हो ?
हालसम्मको अध्ययन अनुसार मिर्गौला ‘फेल’ हुनुको पहिलो कारण मधुमेह हो भने दोस्रो उच्च रक्तचाप र तेस्रो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस । प्रोटिनको मात्रा बढी भएर पिसाबबाट चुहिने रोगलाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनिन्छ । यो रोग लागेको सजिलै भेउ पाइँदैन । अन्त्यमा यसले मिर्गौलालाई ‘ड्यामेज’ गर्छ ।
मिर्गौला फेल हुन थालेको पहिल्यै थाहा पाउन सकिंदैन ?
अहिलेसम्मको ‘ट्रेण्ड’ नै अन्तिम चरणमा अस्पताल आउने छ । समय–समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसबाट बच्न सावधानी अपनाउने हो भने अन्तिम अवस्था भन्दा पहिल्यै जानकारी पाउन सकिन्छ । र, त्यसको सहज उपचार पनि सम्भव छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका मानिसले के के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ ?
यस्ता व्यक्तिले सेवन गर्ने औषधिले शरीरमा चिनीको मात्रा तलमाथि बनाउँछ र मोटोपन पनि बढाउन सक्छ । त्यसकारण खानामा निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ । प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्तिमा मुटु रोगको सम्भावना अरुलाई भन्दा बढी हुन्छ । नूनको मात्रा पनि मिलाएर सेवन गर्नुपर्दछ । मिर्गौला रोगीले अचार, निम्की, भुजिया जस्ता बजारिया र नुनिला पदार्थ खानुहुँदैन ।
रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हुने हुँदा प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्ति रुघाखोकीले मात्रै पनि अरुभन्दा चाँडै सिकिस्त हुन्छन् । नियमित औषधि लिइरहने हुँदा ज्वरो कम आउँछ र रोगको लक्षण अरु व्यक्तिमा भन्दा ढिलो देखिन्छ । तर, रोगले भित्रभित्रै असर गर्ने हुँदा समयमै उपचार गरिएन भने निको पार्न एकदमै गाह्रो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई अहिले भएको के हो ?
प्रधानमन्त्रीलाई रुघाखोकी लागेको हो । संक्रमण बढ्दै गएर छातीसम्म पुग्यो र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखियो । प्रत्यारोपणपछि लिने औषधिले उहाँको शरीरमा चिनीको मात्रा बढी हुन्छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि इन्सुलिन लिइरहनुभएको छ । रुघाखोकी लागेर खान मन नलागेपछि प्रधानमन्त्रीले मधुमेहको औषधि बन्द गर्नुभएको रहेछ, त्यसले शरीरमा चिनीको मात्रा बढायो र सँगै संक्रमण पनि चाँडै फैलियो ।
नियमित अनुगमन गर्न सजिलो हुने भएकाले उहाँलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । इन्फेक्सन भएको बेलामा खाना नखाए पनि मधुमेहको औषधि लिनुपर्दछ, औषधि नखाँदा पनि समस्या आएको हो ।
दशैंको बेला धेरै जनासँग सम्पर्कमा आउँदा पनि प्रधानमन्त्री बिरामी भएको चर्चा छ, त्यस्तो हो ?
कतै न कतैबाट शरीरमा भाइरस प्रवेश नगरी संक्रमण हुँदैन । दशैंमा धेरै मानिसलाई टीका लगाउँदा रुघा लागेकाहरू पनि आएको र त्यहींबाट भाइरस सरेर बिरामी भएको हुने सम्भावना धेरै छ ।
अब संभावित संक्रमणको जोखिम कसरी कम गर्ने ?
प्रधानमन्त्री र अन्यको हकमा पनि रुघाखोकी वा अन्य संक्रमण भएका व्यक्ति नजिक नआउन सूचना प्रकाशित गर्न सकिन्छ । भेटघाटका बेला ‘मास्क’ को प्रयोग गर्न सकिन्छ । फेरि हात मिलाउँदा र छुँदा पनि संक्रमण सर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अरुसँग हात मिलाउने काम पनि बन्द गर्नुपर्छ । नमस्ते गर्दा नै पुग्छ ।
विगत पाँच वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यप्रति उहाँ कति सजग हुनुहुन्छ ?
मानव शरीरलाई आराम पुगेन भने तनाव बढ्छ । तनावले रक्तचाप र मधुमेह बढाउँछ । उमेरका हिसाबले प्रधानमन्त्री कम्तीमा पनि ६–७ घण्टा सुत्नुपर्दछ । तर उहाँले यी कुरालाई ध्यान दिएको देखिंदैन । उहाँको अधिकांश समय सधैं भीडभाड र ब्रिफिङमा बित्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले महत्वपूर्ण भेटघाटको मात्रै समय मिलाउने र राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मरिहत्ते गर्ने कामलाई बन्द गर्नुपर्छ ।